Ọganihu 3D: Ọdịdị Kacha Mma Dị Mma, a na-emelite yana ndozi ụda | Esi m mac
Boom 3D: Ọkachamara Virtual Kachasị Mma, emelitere na nkwalite ụda
Nke a bụ ngwa ọhụrụ nke rutere na Mac App Store na June 8 ma ọ bụ nwanne nwanyị nke okenye nke ọganihu 2, nke ọ ga - enyere anyị aka ịbawanye ụda nke Mac anyị. Na nke a, ọ bụ ụdị ọhụụ nke ngwa ahụ emegharịrị ọhụrụ maka ndị ọrụ nọ na macOS 10.10.3 ma ọ bụ karịa. Nke a bụ ngwa ọhụrụ nke sitere na otu ndị mmepe dị ka Ọganihu 2, Global Delight Technologies Pvt. Ltd, mana nwere ọtụtụ mgbanwe na interface na ngwanrọ ngwanrọ.
Emeela ngwa niile ahụ na nke ikpeazụ Ọganihu 1.0.1D mbipute 3 nke rutere naanị ụbọchị 8 mgbe ọmalitere ọrụ ya, anyị hụrụ tweaks na 3D ụlọ algorithm iji melite ahụmịhe ụda na mmezi ahụhụ na-ahụkarị yana mmelite arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mbipute nke Ọganihu 2, ụdị ọhụụ a nwere ike ịmasị gị, ebe ọ bụ maka imezi ihe gara aga n'agbanyeghị na ị ga-agafe igbe ọzọ. Ọ bụ n'ezie a kpamkpam redesigned ngwa na nwere ihe ọ bụla na-eme na aga na mbipute. Nke a bụ bit ọkachamara na usoro nke nhọrọ na-enye gị ohere ịbawanye ụda na a n'ụzọ pụrụ iche n'ezie.
Banyere ndakọrịta nke ngwa na Mac, ọ dịghị ihe agbakwunyere na ngwa ndetu, mana ọ chọrọ ụdị ahụ macOS 10.10.3 ma ọ bụ karịa dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu a, ma ọ bụrụ na ha adọ anyị aka ná ntị na ngwa ndetu na Ọganihu 3D nwere ike anaghị arụ ọrụ mgbe airplay ma ọ bụ FaceTime nọ n'ọrụ anyị Mac. Ndị ọzọ n'ime anyị agaghị enwe nsogbu ndakọrịta ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụda gbasaa na ngwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Boom 3D: Ọkachamara Virtual Kachasị Mma, emelitere na nkwalite ụda
Ernesto Carlos Hurtado Garcia dijo
Mana ịchọrọ 2.1, 5.1 ma ọ bụ ụdị ụdị usoro okwu okwu ma ọ bụ ndị ọkà okwu iMac na-eme mmetụta 3D?
Zaghachi Ernesto Carlos Hurtado García
Microsoft na-agbakwunye ihe mmetụta mkpịsị aka ya na keyboard ya
Applọ ahịa Mac App kwesịrị imeziwanye ọtụtụ, dịka ndị mmepe ahụ siri kwuo